Umndeni wowesilisa owashona ufuna uKomphela abhadle ejele | Scrolla Izindaba
Umndeni wowesilisa owashona ufuna uKomphela abhadle ejele
USamuel Manyova wase-Sterkspruit washona ngemuva kokuthi imoto ayehamba ngayo ishayiswe ngowayenguNgqongqoshe wezamaPhoyisa nemigwaqo e-Free State, uButana Komphela.
NgoMsombuluko, uKomphela utholwe enecala lokubulala ngokungenhloso wagwetshwa iminyaka emithathu ebhadla ejele ngemuva kokuthi icala lihlehliswe iminyaka emihlanu.
Indodana kaSamuel endala uMninikhaya Manyova, uthe uKomphela akakhombisanga ukuzwelana nabo.
“Ubaba nguyena obondla ekhaya” etshela i-Scroll.Africa.
“Ubenakekela umkakhe nezingane eziyisithupha. Nami ngangisemotweni ngesikhathi kwenzeka ingozi. UKomphela akazange azihluphe ngokusibheka ngaphambi nangemuva komngcwabo kababa.”
Uthe balahlekelwe umuntu obewuthanda umndeni wakhe ngaphandle kokukhala ngezindleko zokuphila.
“Ngingumshayeli wamatekisi futhi kumele ngibheke umndeni wami. Umsebenzi awuzinzile futhi sidonsa kanzima,” esho.
UKomphela uthe waxhoshwa ilanga ngesikhathi ewela imigqa emibili eshayisa i-Polo okwakugibele kulo uSamuel noMninikhaya, kodwa iNkantolo yeMantshi yase-Brandfort yasichitha isicelo sakhe ngoba kwakuyihora lesibili ntambama nelanga lalisaphakeme. UKomphela wayehamba ngesivinini esingu-150km/h emgwaqeni okwakumele ahambe kuwo ngo-80km/h.
Unkosikazi kaSamuel, uNomninikhaya Monyova uthe wayecabanga ukuthi njengoba eke waba isisebenzi sikahulumeni uKomphela angazinikela ngokubasiza.
“Ukhombise unya lwakhe ngokungasishayeli ngisho ucingo. Asijabule ngesigwebo. Kufanele achithe isikhathi eside ejele,” esho.
Umnikazi we-Polo eyonakele, uDanisile Rhabhela uthe naye akakaze awezwe amazwi aduduzayo avela kuKomphela.
“Ngiyazi ukuthi izingozi ziyenzeka. Bengizomamukela futhi ngimxolele ukube wafika walivuma iphutha lakhe, kodwa wenza sengathi akanandaba, futhi nami ngiyakungabaza lokho.”
URhabhela uthe imoto yakhe ayibange isalungiseka wathi usakhokha izitolimende zemoto.
Umndeni uthe ukungakhombisi zwelo kukaKomphela kukhombisile ukuthi akakwazi ukusebenza nabantu.
UKomphela akatholakalanga ukuba aphawule.